Usoro a siri ike na-egbu ọrịa niile ma weghachite ahụike - AFRIKHEPRI
Ike nke a na-egbu ihe niile na-efe efe ma weghachite ahụ ike
Wenezde, Julaị 15, 2020
Mmanụ aṅụ na turmeric
LỌ bụ usoro nke ike a siri ike malitere na Europe n'oge ochie, ya bụ, n'oge ndị mmadụ na-arịa ụdị ọrịa na ọrịa dị iche iche.
Nke a na-eme ihe ike bụ n'ezie ọgwụ nje na-egbu nje bacteria na-adịghị mma na Gram. O nwekwara usoro ọgwụ antiviral na nke antifungal siri ike, na-eme ka ọbara gbasaa na nsụgharị lymphatic n'akụkụ niile nke ahụ. Ngwurugwu ogwu a bu ihe kacha mma maka agha megide candida.
Onye na-eme ihe ike enyerela ọtụtụ ndị aka ịgwọ ọtụtụ ọrịa nje, nje, ọrịa parasitic na ọrịa fungal na ọbụna ọrịa! A ghaghị eleghara ike ya anya n'ezie.
Ọ nwere ike ịgwọ ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ bụ nnukwu. Ọ na-akpali ọbara na-ekesa ma na-eme ka ọbara dị ọcha. Usoro a enyerela ọtụtụ nde mmadụ aka na narị afọ gara aga ịlụ ọgụ megide ọtụtụ ọrịa kachasị njọ. Ihe nzuzo dị na nchịkọta dị ike nke ihe ndị sitere n'okike nke dị elu ma dị ọhụrụ!
Iji chịkọta, onye na-arụ ọrụ a dị irè n'ịgwọ ọrịa nile, na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ike, na-eme dị ka antiviral, antibacterial, antifungal na antiparasitic. Ọ bụ ezigbo aka na ọrịa kachasị njọ.
Ntụziaka siri ike
Ị nwere ike ịgbanye mgbatị mgbe ị kwadebere, karịsịa mgbe ị na-ede akwụkwọ, dịka ị na-atụgharị aka na-esiri gị ike. Kpachara anya, ísì ya dị ike, ọ pụkwara ịkpali ihe ndị ahụ ozugbo.
700 ml nke apụl cider mmanya (na-ejikarị organic)
1 / 4 iko nke garlic a kụrụ nke ọma
1 / 4 iko nke egbuchapụrụ chopped yabasị
2 ọhụrụ na-ede ede, ike ị nwere ike ịchọta (kpachara anya mgbe nhicha ha, na-eyi uwe elu !!!)
1 / 4 nke ginger cup
XMNUMX tablespoons turmeric ma ọ bụ ụzọ abụọ nke turmeric mgbọrọgwụ
Tinye ihe niile dị na nnukwu efere ma jikọta ha, ma e wezụga mmanya.
Nyefee ngwakọta n'ime ite.
Wunye apụl cider mmanya ma jupụta kpamkpam. Ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ite ahụ nwere 2 / 3 ihe nchịkọta akọrọ, ma jupụta mmanya ahụ na mmanya.
Mechie ma nwuo.
Debe ite ahụ n'ime ebe dị mma, kpọọ nkụ maka izu 2. Ebido nke ọma ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
Mgbe 14 gasịrị, nyefee ngwakọta site na colander ma ọ bụ ka mma, gbakwunye gauze iji wepụ ihe ọṅụṅụ ahụ.
Jiri ihe ndi ozo nke akpo na nri ihe oriri.
Onye ike gị dị njikere maka ojiji. Ịkwesighi idebe ya n'ime ngwa nju oyi. Ọ ga-adị ogologo oge.
Ntinye ọzọ: ị nwekwara ike iji ya na kichin - jikọta ya na obere mmanụ oliv wee jiri ya dị ka ihe mgbakwasa salad ma ọ bụ na ị na-agba.
Ntị: ekpomeekpo dị ike!
Ntinye ọzọ: rie otu ogbe oroma, lemon ma ọ bụ wayo mgbe ị gbasiri ike iji wepụ ihe ọkụ ọkụ.
Chebe ọnụ gị na ilo.
Ejila mmiri mee ka nke a ghara belata.
Were 1 tablespoon kwa ụbọchị iji bulie usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma lụọ oyi.
Mee ka ego ahụ dịkwuo ogologo ụbọchị ọbụla ruo mgbe ị ga-erute otu iko iko kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị na-alụso ọrịa ma ọ bụ ọrịa na-esighị ike, buru otu tablespoon nke 5-6 na-eme ihe ike otu ugboro n'ụbọchị.
Ọ dị mma maka ụmụ nwanyị dị ime na ụmụaka (jiri obere doses), n'ihi na ihe ndị ahụ na-emepụta bụ ihe okike ma ghara inwe toxins.
Garlic bụ ude dị ike nwere ọtụtụ uru. N'adịghị ka ọgwụ nje na-egbu ọtụtụ nde nje bacteria nke ahụ gị chọrọ, ọ na-elekwasị anya na nje bacteria na microorganisms. Garlic na-akpali ma nwekwuo ọnụọgụ bacteria dị mma. Ọ bụ onye na-agwọ ọrịa dị ike na-ebibi ihe ọ bụla antigen, pathogen, na pathogenic microorganisms.
eyịm bụ onye ikwu kachasị nso nke galik na o nwere ọrụ yiri nke ahụ ma dị mfe. Ha na-eme ka ha dị ike.
Horseradish bụ osisi dị ike, dị irè maka ọrịa nke mmehie na akpa ume. Ọ na-emepe tract sinus ma na-akpali mgbasa ebe ebe oyi na ọrịa na-amalitekarị, dị ka ọtụtụ ndị dọkịta na-ekwu.
Nne nwere ihe ndị na-emetụta ihe ọkụkụ ma ọ bụ nnukwu akpali akpali nke mgbasa.
Akwukwo bu ike kachasi ike. Nri ha na-eme na-arụ ọrụ ebe ọnọdụ nke pathogenic dị.
Turmeric bụ ihe kachasị mma, ọ na-ehichapụ ọrịa ma na-ebelata mbufụt. Ọ na-egbochi mmepe nke kansa ma gbochie nsogbu. Ọ bara uru karịsịa maka ndị na-arịa ụfụ mgbu.
Apple cider mmanya - A ghaghị inwe ihe dị mma n'iji cider mmanya n'ihi na nna ọgwụ, Hippocrates, na-eji afọ 400 BC eme ihe maka ihe ngwọta ya. Ekwuru na ọ na-eji ọgwụ abụọ eme ihe: mmanụ aṅụ na apụl cider mmanya. A na-emepụta cinema cider cinema site na mkpụrụ osisi ọhụrụ, nke na-acha ọcha ma na-esite na usoro siri ike iji nye ngwaahịa ikpeazụ. Apple cider mmanya nwere pectin, eriri nke na-ebelata cholesterol ọjọọ ma na-achịkwa ọbara mgbali.
Ndị ọkachamara ahụike kwenyere na ndị mmadụ chọrọ ọtụtụ calcium ka ha na-emewanye okenye. Mmanya na-enyere aka wepụta kalsel nke ihe oriri nwere ya, nke na-enye aka n’ịkwa n’ibe ahụ ike. Ihe na-eme ka ike gwụ mmadụ na-akpata potassium, ọ na-akpatakwa nsogbu dị iche iche, gụnyere ntutu isi, mbọ aka na ezé ezé, sinusitis na imi na-agba agba. Udara apple cider bara ụba na potassium. Nnyocha e mere egosiwo na ụkọ potassium na-akpata ibu ngwa ngwa. Enwere ike izere nsogbu ndị a niile ma ọ bụrụ na ị na-eji apụl cider mmanya mgbe niile. Potassium na-ewepụkwa ahihia na-egbu egbu n'ahụ ahụ.
Beta-carotene na-egbochi mmebi ahụ nke free radicals, na-ike akpụkpọ anụ na-eto eto. Apple cider mmanya dị mma maka ndị chọrọ idalata ibu.
Ọ na-agbaji abụba, nke na-akwado usoro ihe mgbochi ọnwụ. Apple cider mmanya na-agụnye malic acid, dị irè n'ịlụso fungal na ọrịa nje. Mmiri a na-ekpuchi ihe ntinye uric acid nke na-agbanye gburugburu nkwonkwo ma si otú a belata ihe mgbu aka. A na-ewepụ ọrịa uric acid ahụ kwụsịrị.
Ọ na-kweere na apple cider mmanya bụ bara uru n'ịgwọ nsogbu dị ka afọ ntachi, isi ọwụwa, ogbu na nkwonkwo, ọkpụkpụ adịghị ike, afọ mgbu, elu cholesterol, afọ ọsịsa, eczema, anya iyatesịt , ala ala ike ọgwụgwụ, nwayọọ nsị na nri, ntutu isi ọnwụ, ọbara mgbali elu, ibu oké ibu, na ọtụtụ ndị ọzọ nsogbu ahụ.
Nke a na-ewusi ike bụ nchikota kachasị mma iji lụso ọchịchọ nke ọ bụla a ọgụ. Chebe ahụ ike gị site na iji ọgwụ nje.
Curcumaxx strongzọ siri ike - 750 ml
37,50€ dị na ngwaahịa
5 ọhụrụ site na 37,50 €
Zụta € 37,50
ka nke ọnwa Julaị 14, 2020 6:08
Ihe ikike turmeric siri ike nke 95% curcumin gbakwunyere ose
Mkpụrụ ihe mgbu na-achọpụta n'okike na Africa
Isi Nzuzo - David Icke (PDF)
6 agobọchị gara aga
" GỤKWUO "
Usoro a siri ike na-egbu ọrịa niile ma weghachi ahụ ike.